Sinu (kuChingezi: snow) kana sinowo kutora izwi reVarungu, kana sidwa uye sitwa kutora kumazwi emitauro yeChibantu. Muchidzidzo che Taranyika, sinowo imhando yekuturuka kwemvura inoitika munzvimbo dzinotonhora zvakanyanya. Sinowo zhinji inonaya kunyika dzinotonhora dziri kuYuropu (Russian Federation, Ukraine]), Ezhiya, neMawodzanyemba eAmerika. Mazaya echando anowanikwawo munzvimbo dzakakwirira zvakanyanya segomo reKilimanjaro kuKenya nekumakomo makuru ari kuChile kuChamhembe cheAmerika.
Chishona hachina izwi rekuti snow nekuti vatauri havana kugara munzvimbo ine snow, saka mutauro we Chishona unotora shoko kubva kumumwe mitauro. Izwi rinobva kuChirungu nderekuti sinowo kana sinu, asi izwi rinobva kumitauro ye Chibantu nderekuti sidwa kana sitwa richibva kumitauro iyi: Iqhwa muChizuru, litwa muChirozi, lehlwa muChisoto ne Chitswana.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinowo&oldid=88793"
Last edited on 14 Nyamavhuvhu 2021, at 14:31
This page was last edited on 14 Nyamavhuvhu 2021, at 14:31.